Alaab -qeybiyeyaasha Bandanayaasha iyo Warshadda - Soo -saareyaasha Bandana ee Shiinaha
gogosha xidhashada mulberry
100% dhar hurdo xariir ah
koox timo caadadii poly caadadii
band timaha caadadii poly
band timaha poly
Ragga Dumarka Bandana Xagaaga Wajiga Daboolka Dhegta Dhegta Dhegta Tube Marada Barafka Silk Neck Gaiter Neefta Bandana
La dhaqi karo oo dib loo isticmaali karo, kani waa maaskaro wajiga lagu sameeyay ama masarka tuubada ayaa sidoo kale loo yaqaan maaskaro qoorta/maaskaro. Kuwani dhammaantood waxaa lagu sameeyay Shiinaha waxaana loo gashan karaa siyaabo badan oo kala duwan. Xiro sida maaskaro baraf, qoor -qoor, balalava, dabool wejiga, madaxa madaxa, ilaalinta qorraxda, koofiyad/koofiyad hoosteeda iyo in ka badan! Dharka ayaa laga sameeyay 95% polyester leh 5% spandex. Waxaan gacmaha ku rinjiyeynnaa oo ku dhisnaa cimaamadaha annaga Golden, CO iyo Greater Denver Area. Shay kasta saddex jeer ayaa la hubiyay si loo ilaaliyo ...
Polyester dhegta loop qoorta qoorta
Naqshadeeye Bandana oo leh dhegta loop qoorta gaiter daboolka wejiga
Bandana oo leh dhegta loop qoorta gaiter wejiga dabool balaclava ragga
Bandana leh dhegta loop qoorta gaiter dabool wejiga
maaskaro wajiga marada bandana durag qoorta
caadada Bandana oo leh dhegta loop qoorta gaiter daboolka Wejiga
Polyester dhegta loop qoorta gaiter naqshad cusub
suuf dhegta loop qoorta qoorta naqshadeeye cusub
Bandana oo leh dhegta loop qoorta gaiter daboolka wejiga midab leh